Nnukwu cha cha na-akwado nkwado ụbọchị abụọ - pisklak.net
Nnukwu cha cha na-akwado nkwado ụbọchị abụọ
Nwere ike imeri ụfọdụ onyinye dị oke egwu ụbọchị abụọ na-esote ma ọ bụrụ na ị na-egwuri egwu na crypto cha cha Oke. Na, ọ bụrụ na ị bụghị onye otu, gaa d e cha cha anyị miniature pịa bọtịnụ ndebanye iji nweta nkwalite ụbọchị abụọ. Nnukwu mmụba cha cha nwere ike ime ka o nwekwuo ohere. Gaan’ihu na-agụ nke a iji chọpụta ihe banyere nnukwu ego a.
Nnukwu cha cha na-agba ume d e okwu ole na ole
Dị nnọọ ka ị na-emebu, ozugbo ndọrọ self cha cha Oke bụ ebe obibi nke nnukwu cha cha bonuses. Anyị na-anọgide na-anwa ịme ụbọchị ọ bụla ka ọ bụrụ ụbọchị dị mma maka ndị egwuregwu anyị ma nyere ha aka ka ha bụrụ ndị mmeri website Id ịkwu ezigbo onyinye cha cha.
Maka ụbọchị abụọ a, anyị kwadebere nkwalite dị elu nke nwere ike ibute gị na mmụba 275 percent. Ego ole agbamume ahụ ga-aba ụba daberen’self love nkwụnye self love gị. Nwere ike ịnweta website Id 55 percent ruo 275 percent agbam ume ma ọ nwere ike ịbụ nnukwu ohere iji nweta nnukwu ego.
Kedu ihe ị kwesịrị ime iji nweta self a? Banye na akaụntụ cha cha gị ma kwuo koodu ahụ: BIGBANG. Echefula na ị nwere naanị ụbọchị abụọ maka iji nkwado a, taa na echi. Tupu ị gbapụta ego ahụ, gụọ usoro nke nkwalite ahụ. Na tebụl dị n’okpuru ị nwere ike ịchọta onyinye zuru oke nke dị maka oghere na-enweghị ọganihu naanị. Max nzọ kwa aka bụ $ 10.
Internet cha cha nwere otutu ohere iji merie
Cha cha Oke nwere ụfọdụ atụmatụ pụrụ iche iji nye ezigbo egwuregwu egwuregwun’ime self dị iche iche anyị na-enye ndị egwuregwu anyị kwa ụbọchị. N’oge na-adịbeghị anya, anyị malitere nhọrọ nke ndị na-ere ahịa ndụ maka gị niile na-achọ igwu egwu d e ndị na-ere ahịa mmadụ kama iji kọmputa. Ọzọkwa, ụbọchị ole na ole gara aga oghere pụrụ iche na-agba ogho oghere amalitela. Sonye Donating miniature nweta nnukwu onyinye.
Ihe kachasị mma na akụkọ a bụ ịkwụ ụgwọ ozugbo ị nwere ike ị nweta naanị nkeji ole d e ole mgbe ị rịọchara arịrịọ. Ihe karịrị ezuru ihe kpatara ịmalite igwu egwu ugbu a!